सेयरमा कसले कमाउँछ, कसले गुमाउँछ «
सेयरमा कसले कमाउँछ, कसले गुमाउँछ
भविष्यमा मूल्य बढ्ने कम्पनीको सेयर किन्ने चाहना सबैको हुन्छ । मूल्य बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने कसरी थाहा पाउने ? भविष्यको घटना कसैले पनि देख्न सक्ने कुरा भएन । यसका लागि अनुमान नै गर्नुपर्छ । अनुमान केका आधारमा गर्ने ?
सेयरको मूल्यको अनुमान गर्न फन्डामेन्टल र टेक्निकल दुई रिसर्च विधि हुन्छन् । फन्डामेन्टल भनेको भविष्यमा दिने प्रतिफल (लाभांश वा बोनस सेयर) को पूर्वानुमान हो । टेक्निकल भनेको भविष्यमा कम्पनीको सेयर मूल्यमा हुने वृद्धिको पूर्वानुमान हो ।
कम्पनीले अहिलेसम्म कति प्रतिफल दिँदै आएको छ ? कम्पनीको वित्तीय अवस्था कति सबल छ ? कम्पनीको बिजनेस प्लान के–कस्तो छ ? कम्पनीका सञ्चालक, मुख्य प्रमोटर के–कस्ता छन् ? कम्पनीले उत्पादन गर्ने वस्तु सेवाको माग बजारमा कस्तो होला ? यो सबै थाहा पाउन कम्पनीको आन्तरिक प्रकाशित तथ्यांक सूचना अध्ययन गर्नुपर्छ । सञ्चालक प्रमोटरको व्यक्तित्व विश्लेषण गर्नुपर्छ ।
बाह्य वातावरण पनि विश्लेषण गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) मा काम गर्ने कम्पनी हो भने भविष्य राम्रो छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । किनकि अबको विश्व त्यस्तैतिर लाग्दै छ । प्लास्टिक उत्पादन गर्ने कम्पनी हो भने भविष्य राम्रो छैन भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । किनकि प्लास्टिक हानिकारक भएकाले हटाउने अभियान विश्वभरि छ ।
कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी (प्रतिसेयर खुद मुनाफा) १५ रुपैयाँभन्दा बढी, नेटवर्थ (सेयर र रिजर्भको जोड) १ सय रुपैयाँभन्दा बढी, रिटर्न अन इक्युटी (नेटवर्थको तुलनामा खुद मुनाफा) १० प्रतिशतभन्दा बढी, पीई रेसियो (सेयर मूल्य र प्रतिसेयर आम्दानीको अनुपात) १५ भन्दा कम, पीबी रेसियो (सेयर मूल्य र बुक भ्यालुको अनुपात) ३ भन्दा कम, बिटा (समूहको औसत सेयर मूल्यसँग अन्तर) शून्यभन्दा कम हुनु राम्रो हो ।
त्यस्तै, पीएस अनुपात (सेयर मूल्य र कम्पनीको आम्दानी रकम अनुपात) २ भन्दा कम, डिभिडेन्ट पेआउट रेसियो (खुद नाफा र लाभांशको अनुपात) ८० प्रतिशतभन्दा कम, डिभिडेन्ट इल्ड रेसियो (सेयर मूल्य र लाभांशको अनुपात) ६ प्रतिशतभन्दा बढी, पीईजी रेसियो (पीई र ईपीएसको अनुपात) १ भन्दा कम भएको राम्रो मानिन्छ ।
टेक्निकल एनालाइसिस गर्न विगतदेखि कम्पनीको सेयर मूल्य मात्र हेरे पुग्छ । कहिले कति माथि पुगेको थियो ? कहिले कति तल झरेको थियो ? अहिले कसरी हिँडिरहेको छ ? सेयरको मूल्य के–कसरी घट्दै गएको छ वा के–कसरी बढ्दै गएको छ भन्ने आधारमा टेक्निकल एनालाइसिस गर्नेले यो अझै घट्छ वा अझै बढ्छ भन्ने अनुमान गर्छन् ।
यिनीहरू फन्डामेन्टलभन्दा एक कदम पछाडि हुन्छन् । मूल्य बढ्न वा घट्न फन्डामेन्टल एनालाइसिसका आधारमा सुरु हुन्छ । टेक्निकल एनालाइसिसको काम जतिसक्दो छिटो त्यसबारे संकेत प्राप्त गर्ने हो ।
फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्नेहरूले कुनै कम्पनीको भविष्य राम्रो छ भन्ने निष्कर्ष निकाले भने सेयर किन्न थाल्छन् । अनि सेयरको मूल्य बढ्न थाल्छ । त्यसैगरी कम्पनीको प्रतिफल घट्दै छ भन्ने अनुमान गरे भने सेयर बिक्री गर्न थाल्छन् र मूल्य घट्न थाल्छ ।
टेक्निकल एनालाइसिस गणित हो, विज्ञान हो, मेसिन हो । यसमा जस्तो इन्पुट दिइन्छ, त्यहीअनुसार आउटपुट दिन्छ । कहिलेदेखि कहिलेको डाटा हाल्ने र कुन कुन ग्राफ बनाउने मान्छेले निधो गर्ने हो । कुन रिजल्टको अर्थ के हो ? मान्छेले थाहा पाउने हो । इन्पुट कति सान्दर्भिक राखिन्छ, कुन विधि रोजिन्छ, रिजल्टको कति सही अर्थ लगाउन सकिन्छ ? त्यसैले केही व्यक्तिले भरपर्दो टेक्निकल विश्लेषण गर्न सक्छन् भने केहीले कम भरपर्दो विश्लेषण गर्न सक्छन् ।
टेक्निकल एनालाइसिसअन्तर्गत ट्रेन्ड लाइन, सपोर्ट एन्ड रेसिस्टेन्ट लेभल, मुभिङ एभरेज, ट्रेडिङ भोलुम, चार्ट प्यार्टन, क्यान्डल स्टिक, फ्र्याक्टल्स आदि हेरिन्छ । यसका आधारमा किन्ने र बेच्ने बिन्दुहरू निर्धारण गरिन्छ । टेक्निकल एनालाइसिस ट्रेडिङ गर्नका लागि उपयोगी हुन्छ । यसका आधारमा छोटो समयमा किनबेच गरिन्छ ।
कम्पनीको जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिहरूले हिसाबकिताब बिगारेर कम्पनीको परफरमेन्सलाई अवास्तविक बनाउन सक्छन् । उनीहरूले आफू निकट मानिसहरूको नाममा उल्लेख्य मात्रामा सेयर खरिद गराउँछन् । कम्पनीको हिसाबमा कृत्रिम नाफा देखाउन सक्छन् । त्यो नाफा प्रकाशित भएपछि सेयरको मूल्य बढ्छ । अनि फ्रड गर्नेहरूले सेयर बिक्री गराएर नाफा कमाउँछन् ।
कम्पनीका सेयरधनीले प्राप्त गर्ने प्रतिफल वा सेयर मूल्यलाई प्रभाव पार्ने सूचना प्राप्त गर्ने सबैको बराबर हक हुन्छ । कम्पनीले केही सूचना सार्वजनिक गर्ने र केही सीमित व्यक्तिलाई मात्र थाहा दिने गर्न पाउँदैन । कम्पनीमा त्यस्ता सूचना तयार हुनासाथ सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम लागू गरिएका हुन्छन् ।
कम्पनीमा सूचना तयार गर्ने र त्यसमा पहुँच हुने उच्च अधिकारीहरूले सूचना सार्वजनिक गर्नुभन्दा पहिले नै आफ्ना मान्छेलाई लिक गर्न सक्छन् । कम्पनीको परफरमेन्स राम्रो होला वा नराम्रो होला भन्ने आममानिसले अनुमान मात्र गर्न सक्छन् । केही मानिस पहिले सूचना पाएर कारोबार गर्छन् भने उनीहरूको जित निश्चित हुन्छ । यो फलास खेल्दा आफ्नो तास थाहा पाएर ब्लाइन्ड चलेजस्तो हो ।
केही व्यक्तिहरू मिल्ने, धेरै पैसा लगाएर कुनै कम्पनी विशेषको धेरै सेयर किन्ने, बजारमा कारोबार हुने धेरै सेयर आफ्नो नियन्त्रणमा लिएपछि आपसमा मिलेर चाहेअनुसार सेयरको मूल्य बढाउने र बिक्री गर्ने । यसो गर्दा खेलाडीहरू कहिलेकाहीं आफै फस्न पनि सक्छन् । सेयर उठाउँदै जाँदा आफैं महँगोमा पर्न सकिन्छ । जम्मा गरेको सेयर बेच्ने बेला महँगोमै बेच्न नसकिन पनि सक्छ ।
कुनै कम्पनीको सेयर किन्न साथीभाइ वा समूहलाई लबिङ गर्ने कार्य हो । यसको मूल्य बढ्छ भन्ने हल्ला फैलाएर माग सिर्जना गर्ने हो । क्रमशः सस्तोदेखि महँगोमा आफूहरूले सेयर उठाउने हो । आममानिसले त्यो सेयर पक्रन थालेपछि बढेको मूल्यमा आफूले पहिले किनेको सेयर फाल्दै जाने हो । यसमा पनि मूल्य बढाउन त खेलाडीहरू सफल हुन्छन्, तर बढेको मूल्यमा बेच्न सफल हुन्छन् नै भन्न सकिन्न ।
पम्प एन्ड डम्प
सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाललाई दुरुपयोग गरेर नाफा गर्ने गिरोह पनि हुन्छ । आफूसँग भइरहेको सेयर वा नयाँ किन्ने सेयरको मूल्य बढाउन पम्प गरिन्छ । पम्प गरेर बढेको मूल्यमा सेयर डम्प गरिन्छ ।
पम्प गर्न उनीहरूले कुनै कम्पनी विशेषको सकारात्मक समाचार प्रवाह गराउँछन् । सानो प्रगति भए अतिरञ्जित गर्ने, नभए सुहाउँदो मिल्दो सिर्जना गर्ने वा तथ्यांकलाई अनुकूल व्याख्या गर्ने गर्छन् । केही समय चुपचाप बस्छन् । अरू लगानीकर्ता त्यही कम्पनीको पछि दौडिरहेका हुन्छन् ।
कम्पनीको सेयर उकालो लागिरहेको बेला पुनः अर्को सकारात्मक समाचार प्रवाह गराउँछन् । त्यसपछि अरू लगानीकर्ता कम्पनीको पछि अझ कुद्छन् । मूल्य ठाडै उकालो लागेका बेला उनीहरूले आफ्नो सेयर बेचेर निस्कन्छन् ।
फाइदा कसले गर्छ
फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्न सक्नेले दीर्घकालसम्मै फाइदा गर्ने पक्कापक्कीजस्तै हुन्छ । इन्साइटर ट्रेडिङ गर्नेको पनि फाइदा त सुनिश्चित हुन्छ । तर, यो गैरकानुनी कार्य हो । एकाउन्टिङ फ्रड गर्नेले कमाउन त सक्छन् । तर, यो काम अति जटिल र पत्ता लागेमा ठूलै फन्दामा परिन्छ । कर्नरिङ, सर्कुलर ट्रेडिङ, पम्प एन्ड डम्पमा सफल भए फाइदा हुन्छ । एक त यसलाई पनि गैरकानुनी मान्ने गरिएको छ । अर्को कुरा असफल भए आफैं डुबिन्छ ।
टेक्निकल एनालाइसिसमा फन्डामेन्टलको मात्रै होइन, गैरकानुनी कारोबारको समेत रिफ्लेक्ट हुन्छ । नाफाका लागि जोखिम लिएर अरूले गैरकानुनी काम गरेका हुन्छन् । टेक्निकल एनालाइसिस गर्नेले त्यसको संकेत पाएर बिना कानुनी जोखिम नाफा कमाउन सक्छन् । त्यसैले राम्रो टेक्निकल एनालाइसिस गर्नेले अल्पकालमै फाइदा गर्न सक्छ ।
सेयर बजार स्पेकुलेटिभ हुन्छ नै । कसैले फाइदा गर्न कसैले गुमाउनैपर्ने हुन्छ । बजारमा कारोबार गर्ने मानिसहरूमध्ये सूचना र विश्लेषणमा जो कमजोर छन्, उसैले गुमाउने हो । नयाँ नबुझेको लगानीकर्ता ठूलो संख्यामा प्रवेश गरेको बेला पुराना बुझेका लगानीकर्ताले कमाउने मौका पाउँछन् ।
नयाँले के गर्ने
युट्युबमा सेयरको फन्डामेन्टल र टेक्निकल एनालाइसिस सर्च गरेर सिक्न सकिन्छ । पढेर, सुनेर जति नै जाने पनि पूर्ण हुँदैन । प्राक्टिस नगरी पोख्त भइँदैन । प्राक्टिस गर्दा केही क्षति हुन्छ नै । त्यसैले गुमे पनि असर नपर्ने गरी थोरै–थोरै पैसा लगानी गरेर सिक्दै जानुपर्छ । बुझेको मानिसले पूरै समय दिएर सँगै राखेर सिकाउँछ भने मात्र पैसा नडुब्न सक्छ ।
पैसा नहाली डमी भर्चुअल कारोबार गरेर पनि सिक्न भने सकिन्छ । आज मैले यो कम्पनीको यति कित्ता सेयर यति पैसामा किने भनेर मान्ने मात्र । बजार हेर्दै विश्लेषण गर्दै जाने । कुनै दिन यति पैसामा यति पैसाको बेचेँ भन्ने मात्र । यो सबै लिखितमा हिसाब राख्ने । पैसा नलगाए पनि आफ्नो विश्लेषणअनुसार आफू कति फाइदा वा नोक्सानमा गइयो भनेर हेर्ने ।